“सोच परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहन्छ” – मो. लालबाबु राउत गद्दी (सदस्य, वार्ता टोली, मधेशी मोर्चा)
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ता“सोच परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहन्छ” – मो. लालबाबु राउत गद्दी (सदस्य, वार्ता टोली, मधेशी मोर्चा)
Wednesday, 14 October 2015 10:33	Rate this item
० दुई चरण वार्ता भइसकेको छ । तर, कुरो मिलेको छैन । कुरो कहाँ अड्किएको छ त ?
— शासक जातिको मानसिकतामा कुरा अड्किएको छ । उनीहरूको हठमा कुरा अड्किएको छ । उनीहरूको परिवर्तन विरोधी सोचमा कुरा अड्किएको छ । अहिलेको शासन प्रणालीलाई यथावत् राख्ने उनीहरूको सोच छ । यही सोचका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ० मुख्य विवाद के मा रहेछ ?
— मुख्य कुरा सीमाङ्कन नै हो । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशहरूको स्थानीयस्तरमा स्वशासन हुनुपर्छ । तर, त्यो स्वशासनबाट जनतालाई विमुख पार्ने काम अहिलेको पुनःसंरचनाले गरेको छ । प्रदेशहरूलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर जातीय क्लस्टरलाई समाप्त पारिएको छ । उत्पीडित समुदायको बसोबासलाई खण्डित गरिएको छ । पुरानै शासकहरूको वर्चस्व हुने गरी प्रदेशहरू बनाइएका छन् । ० मधेशमा दुई प्रदेशको कुरामा सरकारी वार्ता टोलीको भनाइ के आयो ?
— सरकारी वार्ता टोलीबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आइरहेको छैन । संविधानमा नै आयोगको व्यवस्था छ, र त्यहीअनुसार सीमाङ्कनका विषय मिलाउनुपर्ने सरकारी टोलीको भनाइ छ । आयोगले दिने रिपोर्टअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हाम्रो स्पष्ट धारणा के आयो भने विगतमा पनि आयोग बनेको थियो । अझ त्यतिबेलाको आयोगमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीलगायतको प्रतिनिधित्व थियो । तर, त्यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मानिएन । त्यसैले हामीले के भनेका छौं भने राज्यपुनसंरचना समितिले खाका अनुसार मधेशमा दुई प्रदेश हुनु पर्छ । त्यस बेलाको समितिको खाकालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पहिला आएको आयोगको रिपोर्ट कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीले मानिरहेका छैनन् भने अब बन्ने आयोगको रिपोर्ट कसरी सर्वमान्य हुन सक्छ । अर्को कुरा राज्यको सिमानाको निक्र्यौल गर्ने अधिकार संविधानसभा बाहिरको आयोगलाई छैन । ० त्यसो भए अहिलेको वार्तालाई नौटंकी भन्न मिल्छ ? — होइन । हामीले उनीहरूलाई तपाईंहरूको धारणा स्पष्ट रूपमा ल्याउन भनेका छौं । आशा गरौं अबको वार्तामा उनीहरूले स्पष्ट धारणा ल्याउने छन् । हामीले उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौं कि मधेशमा दुई प्रदेशबाहेकको कुरा मान्य हुँदैन । ० सीमाङ्कनको विषयमा अब हुने वार्तामा सरकारी टोलीले ठोस आधार ल्याउँछ त ?
— हेरौं । सरकारी टोलीले के गर्छ । सीमाङ्कनका साथै अन्य विषयमा पनि छलफल भएको थियो । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायत विषयमा पनि हामी कुरा राख्यौं । सीमाङ्कनको विषय पूरा भएपछि मात्र अन्य विषयमा कुरा गछौं भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छौं । ० तेश्रो चरणको वार्ताबाट पनि सीमाङ्कनको विषय टुंगिएन भने के गर्नु हुन्छ ?
— अबको वार्ताबाट के कुरो निस्किन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन । देशको परिस्थिति बिग्रिदै गइरहेको छ । हामीले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष प्रष्ट रूपमा धारणा राख्यौं कि काठमाडौंको आँखाले मधेशको आन्दोलनलाई हेर्नु भएन । मधेशमा विकराल स्थिति श्रृजना भइरहेको छ । राज्यले गरेको व्यवहारका कारण आफूहरू यो देशको नागरिक नै होइन भन्ने भावना मधेशीहरूमा देखिन थालेको छ । त्यसैले काठमाडौंले दृष्टिदोष सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अब राज्यले मधेशीका समस्या बुझेन भने यो देशके लागि दुर्भाग्य हुनेछ । ० मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र नयाँ सरकारको गठनमध्ये राज्य र प्रमुख तीन दलको प्राथमिकताको विषय के बनेको महसुस गर्नुभएको छ ? — त्यो प्रष्ट रूपमा देखिएको छ नि । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता त सरकार नै रहेको छ । मधेश जलिरहेको छ । साम्प्रादियक सद्भावना खल्बलिने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ । यी नेताहरूले मधेश आन्दोलनलाई गुन्डाहरूले गर्ने होहल्लाको संज्ञासमेत दिने गरेका छन् । त्यसैले अब पनि उनीहरूको सोचमा परिवर्तन आएन भने समस्या समाधान हुँदैन । ० मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म यो समस्या रहिरहने भयो त ?
— उनीहरूले मानसिकता परिवर्तन गर्नै पर्छ । यसका साथै उनीहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । मधेशलाई विदेशी अनुभूति गराउने कार्य राज्यबाट भइरहेको छ । निश्चित रूपमा यो हाम्रो लागि एकदमै दुखदायी कुरा हो । ० मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएन नि ?
— निश्चित रूपमा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने थियो । यो त पार्टीले निर्णय लिने कुरा हो । वार्ता टोलीमा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुँदा राम्रो हुन्थ्यो । ० वार्ता टोलीहरू कत्तिको अधिकार सम्पन्न छन् त ?
— वार्ता टोलीको काम मध्यस्तकर्ताको हो । महेश आचार्य प्रधानमन्त्रीको नजिकका हुनुहुन्छ । त्यस्तै, अग्नि खरेलजी केपी ओलीको खास व्यक्ति हुुनुहुन्छ । त्यसैगरी, नारायणकाजी श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहालको विचारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । हामीहरू पनि आ–आफ्ना पार्टीका विचारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौ । र, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, उनीहरू तीन शीर्ष नेताहरूकै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ० सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
— सरकारले थालेको संविधान संशोधनको प्रक्रियाले राज्यले आफै महसुस गरेको छ कि हालै ल्याइएको संविधान अपूरो छ । यो संविधान पेलेर ल्याएको कुरा राज्य र तीन दलले महसुस गरेका छन् । यसरी पेलेर ल्याइएको संविधानलाई उत्पीडित वर्गले स्वीकार गरेन भन्ने कुरा राज्यले बुझेको छ । झण्डै चार दर्जन मधेशीले शहादत दिएपछि उनीहरूको दिमागमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नै कुरा आयो । हामीसँग वार्ता नै नगरी दुई प्रदश बनाइदियो भने स्वीकार गछौं भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएका छौं । ० आन्दोलनको डेढ महिनापछि बल्ल वार्ता सुरू भएको छ । जारी वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा मधेशी जनता विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ ? — मधेशी जनता ठगिने काम हुँदैन । यस्तो काम हामी हुन दिँदैनौं । अधिकार सुनिश्चितताबाट वञ्चित हुनुपर्ने काम कुनै पनि अवस्थामा हुँदैन । ० कागजमा सीमित हुने सम्झौता गर्नु हुन्न नि ?
— होइन । हामी मधेशी जनतालाई अधिकार दिने काम मात्र गर्र्छौ । मधेशीको स्वायत्त मधेश प्रदेशको आकांक्षाअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौं । ० त्यसो भए, आन्दोलन लम्बिने सम्भावना छ ?
— अब राज्यले नटेरेपछि आन्दोलन लम्बिन सक्छ । विभेदमा पारिएका समुदाय अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि एक–दुई महिना दुःख भोग्न मधेशी जनता तयार हुुनुपर्छ । दोश्रो दर्जाको नागरिकबाट पहिलो दर्जाको नागरिक बन्न कष्ट भोग्नुपर्छ । जसरी मधेशीहरू अपमानित भइरहेका छन् । यो अपमानभन्दा दुई–चार महिनाको दुःख थोरै छ । ० नाकाबन्दीको नाममा भइरहेको भारतविरोध गतिविधिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो असर परेको छ ? — पक्कै पनि असर पारेको छ । नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध बिगार्न केही व्यक्ति लागिपरेका छन् । तर, यिनीहरूको षड्यन्त्र सफल हुँदैन । नाकाबन्दी हामीले गरेका छौं, तर भारतलाई बद्नाम गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रकाशित मिति : २०७२ असोज २२ गते शुक्रबार । (मधेशवाणीका लागि अजय साह शिवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)	Read 423 times	Tweet
« मधेश आन्दोलनमा पहाडी समुदायको साथ चाहिएको छ : जितेन्द्र सोनल …नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ-राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी »